Sidee u daawan karaa files Jabbuuti oo ku saabsan mobile ah dadkayga aan ciyaaryahan Flash ah
> Resource > Video > Beddelaan Jabbuuti oo Files Wixii Radidiyaha on Qalabka telefoonada gacanta
Nasiib darro, ciyaaryahanka Flash mobile la iska daayeen by Adobe. Waxaad mar dambe ma bixi kartaa ka Google Play midkood. Si aad u soo dejisan, waxaa fiican, inaad u akhrido u geliyey Adobe ee Bulshada . Waxaad weli ka soo dejisan kartaa waxa gacanta ka archive ah. Ka dib markii download ah, isku day in aad la furto Flash-site si loo arko haddii shaqeeya ama loo maqli karo dhib la'aan ah oo ku saabsan qalabka aad mobile.
Haddii kale, waxaad isku dayi kartaa in ay badalo iyada oo ah Converter online Jabbuuti (Habka 1) ama Converter desktop (Habka 2) .
Habka 1: Online Jabbuuti oo Converter
Waxaad ka heli kartaa Converter ku anfacaya online hoose si loogu badalo files Jabbuuti oo aad u loo maqli ku saabsan qalabka aad mobile. Waxaad sidoo kale u badalo karaa in file MP4 taas oo ka badan haboon screens yar ama wax kasta oo nooc qaab kale oo la taageeray converters online kala ah.
Fiiro gaar ah: Waxaad tahay oo keliya loo oggol yahay inay geliyaan oo loogu badalo mid file waqti iyo xawaaraha diinta ku xiran tahay tirada file dhabta ah iyo sidoo kale xiriir Internet.
Fiiro gaar ah: Just riix halkan si aad u hesho Liiska ah Online Video converters . Haddii aad u baahan tahay qaababka dheeraad ah ama fursadaha in faylasha aad, fadlan hubi Habka 2: Desktop Converter .
Kale oo ka taageeraya dheeraad ah qaabab wax soo saarka, waxaad badbaadin kartaa waqtiga la sugayo aad diinta sida Wondershare Video Converter Ultimate diinta Dufcaddii taageero. Just Chuck in dhammaan faylasha aad halkii diinta mid mid. Converter desktop A ayaa sidoo kale waxay leedahay in ka dhisay-in muuqaalada marka la barbar dhigo Converter internetka sida qalabka tafatirka iyo sidoo kale goobaha ay ku ganaaxi-habayn faylasha aad.
Interface waa user-friendly ku filan xataa dadka bilaabaya in ay awoodaan in ay maraan habka loo marayo. Si kastaba ha ahaatee, waxaan sidoo kale ka mid ah tilmaamaha tallaabo-tallaabo oo kaliya haddii aad u baahan tahay.
Talaabada 1: badalo ku saleysan Devices
Upload files Jabbuuti aad,
Nooca Select ee Device ka Qaabka Output (aad awoodi kartid in aad u hesho qalabka ugu badan ee horena u ahaan), haddii kale ay doortaan waxa ay ku salaysan jecel ama Qaabka ,
Fiiro Gaar ah: Waxaa jiri doonaa bar horumarka muujiyey aad wargelinta inta ay ku qaadan doonaa si loogu badalo faylasha aad ah.
Talaabada 2: Edit Files
Guji Edit inuu ku soo bilowdo sixiddiisa faylasha aad,
Xulashada kale: Gubashada Files galay DVD ah
Riix Gubashada tab,
(Ikhtiyaar) Click Edit inuu ku soo bilowdo sixiddiisa faylasha aad,
Dooro doorashada menu ka Change Template ,
Dheellitir Tayada iyo muuqa ,
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa videos online ka ah goobaha caanka ah ee la Wondershare Video Converter Ultimate. Fiiri ku Download tab ee laguugu sahlo.